Maamulka Puntland oo dejinaya qoshe howleedka shanta sano ee soo socota – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe – Mareeg.com: Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta ka furay xarunta Jaamacadda PSU Garoowe shirka qorshe-howleedka maamulkaasi ee shanta sanno ee soo socota.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdulaahi Cumar iyo wasiiradda maamulka Puntland ayaa ka qaybgalay kulankaasi, waxaana looga arinsanayay sidii loo midayn lahaa dadaaladda, uu maamulka ku doonayo in uu ku soo bandhigo qorshe howleedka, waxana labada maalin ee uu socdo kulanka laga doonayaa in la dhaqan qeliyo qodobadda ka soo baxa oo in badan oo ka mida Dr Cabdiweli Gaas balanqaaday xiligii doorashada.
Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay shirkaasi ayaa u kala saaray shan qodob oo kala ah:
1-Xoojinta Nabadgelyadda iyo dib u dhiska xarumaha Ammaanka.
2-Dib u heshiisiinta, Cadaaladda iyo Dimuqraadiyadda.
3-Ganacsiga, Dhaqaalaha, dhiirigelinta Maalgeshiga & horumarinta Kaabayaasha dhaqaalaha.
4-Horumarinta Arrimaha Bulshadda sida Caafimaadka & Waxbarashadda.
5-Maamul Wanaaga (La xisaabtanka & la dagaalanka Musuq-maasuqa).
Madaxweynaha Maamul goboleedka Puntland ayaa xusay in dowladda Turkiga ay gacan ka geysaneyso dhismaha xarunta farsamada gacanta, isagoo kula dar daarmay ka qeyb galayaashii kulankaasi inay u istaagaan sidii ay u soo saari lahaayeen qorshe howleed uu ku shaqeeyo maamulka Puntland muddada shanta sano ee soo socota.